ဓို့ ယွာဂ ဗဂျီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ဓို့ ယွာဂ ဗဂျီ
ဓို့ ယွာဂ ဗဂျီ
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Jun 9, 2013 in Arts & Humanities | 25 comments
ကျနော် ကတိပေးထားသလို ရေဆေး အစိုရေမျှောဆွဲတာနဲ့အခြောက်ဆွဲတဲ့ပုံကွာဟချက်လေး ကို ကျနော် တင်လိုက်ပါတယ်..။ မခိုင်ဇာ ( ကော်မန့် မှာ ဘယ်လိုခေါ်ရမှန်း မသိလို့အကိုလို့ ခေါ်ထားမိသေးတယ်) ပြောတဲ့ စက္ကူ တခုလုံးရေဆွတ်တယ် ဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်တာပေါ့..။
စက္ကူကိုရေဆွတ်တယ်ဆိုတာ စက္ကူခြောက်သွေ့ တာကို မလိုချင်လို့ ပါ..း)
ဘာလို့ မခြောက်စေချင်တာလဲ ဆိုရင် ကိုယ်ဆွဲမယ့် ပန်းချီက မှိုင်းမှုန်တဲ့ မိုးတွင်း ၊ မိုး၇ိပ်..
ဆောင်းမြူနှင်း၊ မြူခိုး ဒါကို ပြချင်ရင် . စက္ကူတခုလုံးရေဆွတ်ပြီး ဆေးတင်လိုက်တဲ့အခါ ဆေးရောင်အနားသားတွေ မပြတ်ဘူး၊ အရောင်တခုနဲ့ တခု ရောယှက်သွားတာ ဘယ်နားမှာ
ရောသွားမှန်း မသိအောင် စက္ကူမှာ စိုနေတဲ့ ရေက အကူအညီပေးတာပါ..။
တချို့ က စက္ကူကိုေ၇ဆွတ်ပြီး လုံးဝရေ ပြန်မစုပ်ယူပါဘူး။ တချို့ က စက္ကူတခုလုံးရေဆွတ်ပြီးမှ စွပ်ကျယ် စလေးနဲ့ ပြန်စုတ်ယူပါတယ်..။ ကိုယ်ဆွဲမယ့် ကားအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ စက္ကူကလည်း အမျိုးအစားကွာပါတယ်.. ၂၀၀ ဂရိန်လောက်ထူတဲ့ စက္ကူကို ရေဆွတ်လိုက်ရင် ခုန်းကြွတက်လာတတ်ပါတယ်..။
၃၀၀ သို့ မဟုတ် ၄၀၀ ဂရိန်လောက်ထူတဲ့စက္ကူတွေက ရေမျှောဆွဲလို့အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ရေဆေး ဆွဲလို့ ဘုတ်ပြား( ပုံဆွဲစက္ကူကပ်ထားသော အောက်ခံ)
ကို ၃၅ ဒီဂရီစောင်းထားတာ အသင့်တော်ဆုံးပါ…လို အပ်ရင် ၁၈၀ ဒီဂရီ အပြားလိုက်ချပြီး မျှောရတာလဲ ရှိပါတယ်။ ပုံပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်.။
တချို့ က လုံးဝရေမဆွတ်ဘဲ စက္ကူအခြောက်အတိုင်းဆွဲပါတယ်။
နောက်တမျိုးက မျှောချင်တဲ့နေရာကိုဘဲ ကွက်ပြီး စုတ်နဲ့ ရေဆွတ်တယ်..။ ရေမမျှောဘဲ
တိမ်တချို့ ကို အရောင်ပိုင်းခြားပြချင်တဲ့အခါ ဒီနည်း သုံးပါတယ်..။
ကျနော့်ရဲ့ မြန်မာပြည် လယ်စောင့်တဲလေးက တကားလုံး ရေမျှောထားတာပါ..။
( ရေမျှော )
လွမ်းရိပ်ဆင် မကြင်လို့ လား
မမေ့ မလျော့ ရှင်းပြတဲ့ အပြင် နာမည်ရင်းကိုပါ မှန်အောင်ခေါ်နိုင်လို့ လေးစားပါ၏။
အဲဒါ ကို ဂီ ကျေးဇူးကြောင့်ပါ.. သူ့ ကော်မန့် ထဲမှာ တွေ့ လို့၊ အရင်က မသိဘူး.. မခိုင်ဇာကို အကိုလို့ ခေါ်မိသေးတယ်..
ကျနော်တွေ ဗျာတွေနဲ့ ပြောပုံထောက်တော့… မန္တလေးကလား..။
ကျုပ် နာမည်ကို ဘယ်တော့မှ ကောင်းကောင်းမခေါ်တဲ့ လူဆီကမှာ ကျုပ်နာမည်သိတယ်လို့ကွယ်။
ဝါသနာလည်းပါတဲ့အတွက် နောက်ထပ်လည်း တင်ပေးစေချင်ပါတယ် ။
ရေဆေးဆွဲကြတဲ့အထဲမှာ ရေမျှောက ပိုခက်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်
ပန်းချီကို စိတ်ဝင်စားတာ ကောင်းပါတယ်..
နောက်ထပ်လဲ တင်ပေးဦးမှာပါ..။ ဟုတ်ပါတယ်.. ရေမျှောက ပိုခက်ပါတယ်..။ ဒါကြောင့် ရေမျှောဆွဲရင် အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့်
၃၅ံစောင်းထားပြီး ဆွဲဘို့ပြောတာပါ..။ ရေ အချိန်အဆရယ်.. စုတ်မှာပါတဲ့ ရေ+ ဆေး အချိန်အဆရယ်ကို နိုင်အောင် ထိမ်းနိုင်ရပါမယ်..။
လေးစားပါတယ် အူးလေးရေ ကိုယ်တိုင်တော့ ခဲခြစ်နဲ့ ဆီဆေးနည်းနည်းပါးပါး
အွန်လိုင်းမှာ ပြန်မသုံးပါဘူး .. ကျောင်းတွင်းပရောဂျက်လေးမှာပဲ လိုအပ်ရင်ပရင့်ထုတ်ချင်လို့ပါ ..
ပန်းချီကားတွေ ကူးလို့ ရပါတယ်ဗျာ..။ အွန်လိုင်းမှာ လိုအပ်ရင်လဲံ သုံးပါ။ ကျောင်းက ပရောဂျက်အတွက် လိုအပ်မယ်ဆိုလဲ သုံးပါ..
သိပ်လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင် မေးလ် နဲ့ ဆက်သွယ်ပါ..။ ပညာရေးအတွက် ကူညီရတာဘဲ..ကိုယ်က တောင် ၀မ်းသာရဦးမှာပါ..။
kyawswarkaung@ gmail.com ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်..။
အထူးသဖြင့် အခြေအနေနဲ့စိတ်ခံစားချက်က နောက်တစ်ခါပြန်မရလို့
ကျွန်တော် လည်း ဗဂျီ ကို ချစ်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်က တော့ ပန်းချီ သင် တန်း လေး ဘာလေး တက်ပြီးး အ တော် ရူးသွပ်မိသေးတယ်။
အခု အချိန်မှာ တော့ ပန်းချီ ထက် ပိုပြီး
အချစ်ပို မိတဲ့ အနနုပညာ နောက်ပဲ လ်ုက် ဖြစ်နေ သေးတယ်။
ကျွန်တော် ဆွဲ ထားတဲ့ ပန်းးချီကား တွေ တော့ ရှိတယ်။
ဘယ်သူ့ ကိုမှ မပြရဲဘူး
ဘယ်သူမှ လည်း ကျိချင် မှာ မဟုတ်ဘူး။
ပန်းချီကားတွေ ကြည့်ရတာ ၀ါသနာပါတယ်။
ငယ်ငယ်ကတော့ ကျောင်းရှေ့မှာ ပန်းချီကားချပ်တွေ ရောင်းရင် အကြာကြီး မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဘယ်လို ဆွဲလဲ ဆိုပြီး ကောက်ကြောင်းတွေ ရေးပုံရေးနည်းတွေ ကြည့်ခဲ့ရတယ်။
အမျိုးသားပြတိုက်မှာ ပန်းချီကားတွေ တနေကုန် ထိုင်ကြည့်ပြီး ဆရာကြီးတွေ ဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေ လိုက်တု ဆွဲခဲ့ဖူးတယ်။
ငယ်စဉ် ကတည်းက ရူးသွပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အထဲမှာ ပန်းချီ ပါတယ်။
I love all, the first one is most.
ဟုတ်တယ်။အပေါ်ဆုံးပုံ အကြိုက်ဆုံးပဲ ပြောတတ်တယ်။
ရေမျှောတာလည်း မျောချင်ရာမျောရင် ရောကုန်မှာပေါ့နော။
အောက်ဆုံးက ပုံလေးက ကြည့်ပြီးတစ်မျိုးခံစားရယ်. .. တော်လိုက်တာ..
အားပေးတဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေကို တယောက်ချင်း ပြန်မရေးတော့ပါဘူး.. ခြုံငုံပြီး အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ပြောပါရစေ..။
ကျနော် တင်လိုက်တုန်းက တမျိုးဗျ.. ဆိုဒ် ပေါ်မှာ ရောက်တော့ တမျိုး ဖြစ်နေတယ်..။
ဒါကြောင့် ဒီမှာဘဲ ဖြည့်စွက် ပြောပါ့မယ်..။
ဒုတိယ ပန်းချီကားလေးကို ကျနော် က “ ရာသီ ပြောင်းချိန် ” လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်.။
လုံးဝ ရေမမျှောဘဲ . အခြောက်ဆွဲထားတာပါ..။ ဘက်ကရောင်းရဲ့တောတန်း ခြုနွယ်တွေကို သတိထားကြည့်ပါ.. ဆေးရောင် အနားသား တွေ ပြတ်သားနေပါတယ်..။
တတိယ ကားလေးက “ လွမ်းရိပ်ဆင် မကြင်လို့ လား ” လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်..။ ထူးခြားချက်က လိုအပ်ပြီး
ကိုယ်ရေမျှောချင်တဲ့ နေရာကို စူတ်နဲ့ ရေဆွတ်ထားပါတယ်.. ဆေးကို ဖြတ်ထားချင်တဲ့ နေရာကို စက္ကူသား အခြောက်အတိုင်း ထားပါတယ်..။ တတိယ ကားရဲ့ တိမ်တိုက်တွေကို သတိထားကြည့်ပါ.။
ဗုံဗုံ… အထူးသဖြင့်ပေါ့.. ခံစားချက်ပါလာလို့ ပြောရရင်.. တတိယ ကားလေးဆွဲနေရင်း..
လွမ်းသလို လို အားငယ်လာသလိုလို ဖြစ်လာလို့ …
“ လွမ်းရိပ်ဆင် ..မကြင်လို့ လား ” လို့ အမည်ပေးခဲ့တာပါ..။
မှတ်ချက်။ ။ လောလောဆယ် ပုံတင်တာနဲ့မန်းဂေဇက် မောင်နှမများရဲ့ အမည်နဲ့သတ်ပုံတွေကို အသည်းအသန် ခေါင်းစား လေ့လာနေပါကြောင်း။။ အမှီလိုက်ဘို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ပို့ စ် ခေါင်းစဉ်ကို မန်းဂေဇက် သတ်ပုံနည်းအတိုင်း အားထုတ်ထားပါဂျောင်း.။
” ပို့ စ် ခေါင်းစဉ်ကို မန်းဂေဇက် သတ်ပုံနည်းအတိုင်း အားထုတ်ထားပါဂျောင်း ”
ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူးကွယ် ။
ကျနော် စ ” လိုက်မိ တာပါ…ဘဖောရယ်..
အတည် မယူလိုက်ပါနဲ့ ..။
ရေမျောထားတဲ့ လယ်စောင့်တဲလေးကို ကြိုက်တယ်
ကိုယ်တိုင်ကတော့ မျဉ်းတောင်ဖြောင့်အောင် ကွေးအောင်မဆွဲတတ်လောက်အောင်
ထုံးစံအတိုင်းပဲဗျာ ၊ သိပ်နားမလည်ပေမယ့်
ကြည့်ရတာတော့ အရသာတစ်ခုခု ရှိသလိုပဲ
ပန်းချီပန်းပု အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် မနီးစပ်လို့ ကျွဲပါးစောင်းတီး
ပန်းချီ ကို ရေးပုံဆွဲပုံ..
ကျွန်တော်တို့လို နလပိန်းတုံးတွေ နားလည်အောင် ပညာခန်းလေးတွေ ရေးပေးနိုင်ရင်
မော်ဒန်ပန်းချီတွေ အကြောင်းကိုလဲ အထူးစိတ်ဝင်စားပါတယ်
နိုင်ငံတကာမှာ ဘာကြောင့်ဒီလောက် ဈေးကြီးတွေပေးနေကြတယ်ဆိုတာ အံ့သြဘနန်းလဲဖြစ်မိတဲ့အတွက်
ပန်းချီနဲပါတ်သက်လို့ အထွေထွေဗဟုသုတတွေသိခွင့်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါကြောင်း..
ရွာရဲ့ ပန်းချီဆရာအနေနဲ့လဲ ၀မ်းပန်းတသာ ဂုဏ်ယူပါကြောင်း ၀င်ပြီးလေရှည်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ
ပန်းချီကားသုံးမျိုး နဲ့ ရေဆေးဆွဲပုံတွေပါရှင်းပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကိုယ်တိုင်တော့ အဖြစ်မရှိပါဂျောင်းးး :hee:
ကြောင်အကြီးကြီး ပုံတပုံ ရေဆေးပန်းချီ ဆွဲနိုင်မှ ဆရာခေါ်မယ်ဗျို့…
ပန်းချီနဲ့ ပတ်သက်ရင် တီကောင်ငါးကောင်တောင် ဖြောင့်အောင် မဆွဲနိုင်သူပါ။
ရွာထဲက အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ပန်းချီကားတွေကို မျက်စောင်းရော မျက်လုံးရော ထိုးနေသဗျ။
အချိန်ကျရင် အကူအညီတစ်ခု တောင်းဖို့ ဆိုလားပဲ